Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှိ ရွှေတွင်းတစ်ခု၌ ပိတ်မိနေသူ ၁၁ ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ် Qixia မြို့ရှိ ရွှေတွင်းတစ်ခုတွင် ပိတ်မိနေသည့် မိုင်းလုပ်သားများအား ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ကယ်ထုတ်လာစဉ်(ဆင်ဟွာ) Social, Education & Health
ကယ်ဆယ်ရေးသမားများက နောက်ထပ် ရွှေတွင်းလုပ်သား နှစ်ဦးကို ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီ ၁၈ မိနစ်တွင် ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် စုစုပေါင်း မိုင်းလုပ်သား ၁၁ ဦးထိ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၃ မိနစ်တွင် ပထမဆုံး ရွှေတွင်းလုပ်သားတစ်ဦးကို စတင် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရွှေတွင်းလုပ်သားသည် အလွန်ပင်ပမ်းနွမ်းနယ်နေပုံရပြီး ၎င်းအား ဆေးရုံတစ်ခုသို့ အမြန်ပို့ဆောင်၍ အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုပေးခဲ့ရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ် Qixia မြို့ရှိ ရွှေတွင်းတစ်ခုတွင် ပိတ်မိနေသည့် မိုင်းလုပ်သားများအား ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ကယ်ထုတ်လာစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လက်ရှိတွင် အခင်းဖြစ်နေရာ၌ ကယ်ဆယ်ရေး ကိရိယာ ၄၀၇ ခုကို အသုံးပြု၍ ကယ်ဆယ်ရေးသမား ၆၃၃ ဦး က လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဆန်းတုန်းပြည်နယ် Yantai မြို့ရှိ Qixia ၌ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် ရွှေတွင်းမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားချိန်ကတည်းက မိုင်းလုပ်သား ၂၂ ဦးသည် မြေအောက်အနက် ၆၀၀ မီတာတွင် ပိတ်မိနေခဲ့သည်။
ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည် ယနေ့ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်မတိုင်မီထိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိသော မိုင်းလုပ်သား ၁၀ ဦးဖြင့်သာ အဆက်အသွယ်ရရှိခဲ့သည်။ ကျန်မိုင်းလုပ်သားများမှာမူ အသက်သေဆုံးသွားကြဖွယ်ရှိကြောင်း ယုံကြည်ရသည်။(Xinhua)
JINAN, Jan. 24 (Xinhua) -- Eleven miners were rescued on Sunday after being trapped underground for two weeks due toablast inagold mine in east China's Shandong Province.
Rescuers lifted two workers at around 3:18 p.m., bringing the number of rescued workers to 11.
Currently, 633 people and 407 equipment are at the site for rescue operations.
Twenty-two miners have been trapped about 600 meters underground since the mine blast on Jan. 10 in Qixia, under the city of Yantai, in Shandong Province.
Before Sunday, rescuers had established contact with only 10 of the miners, who are in good physical and psychological condition. Another is believed to have been dead.
A trapped miner is lifted fromagold mine in Qixia City, east China's Shandong Province, on Jan. 24, 2021. (Xinhua/Luan Qincheng)